यो कृषि अनुदान वितरण प्रणालीमै खोट छ
(डा. केदार बुढाथोकी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बाट अवकाशप्राप्त कृषि वैज्ञानिक हुन् । अवकासपछि उनी कृषि फर्म सञ्चालन गरेर निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा र परामर्श दिँदै आइरहेका छन् । उनै बुढाथोकीसँग नेपालको कृषि सम्भावना र यसका समस्याबारे गरिएको कुराकानीः सम्पादक)
० नेपालमा कृषिको सम्भावना छ भनिन्छ । तर युवाहरूको यसमा आकर्षण देखिँदैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?
–कृषिको सम्भावना विश्वका अरु देशमा भन्दा नेपालमा ज्यादा छ । मैले बितेका ५० वर्षमा विश्वका धेरै देश घुमेँ । तर, नेपालमा जत्तिको कृषि सम्भावना भएको ठाउँ अन्यत्र कहीँ देखिनँ । नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई तीनै किसिमको भूगोल छ । हाम्रा यी तीन किसिमका भूगोलमा संसारमा जुनसुकै ठाउँमा हुने चिजबिजहरू हुन्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारत सबै देशमा हुने कुरा हाम्रो देशमा हुन्छ । अब तपाईं नै भन्नुस, के नेपालमा कृषिको सम्भावना छैन ?
० यतिको सम्भावना भएर पनि यसको विकासचाहिँ किन हुन सकेन त ?
–हिमालमा एउटा प्रजातिको मृग पाइन्छ । त्यसको नाम हो – कस्तुरी मृग । शरीरबाट सुगन्ध दिने यो मृगको एउटा स्वभाव बडो बिचित्रको छ । यसले आफ्नै सुगन्ध थाहा पाउँदैन र त्यही सुगन्धको लागि भौतारिरहन्छ । हामी नेपालीको अवस्था पनि त्यही कस्तुरी मृगको जस्तै छ । हामीले अथाह सम्भावना कृषिमा भएता पनि त्यो सम्भावना चिन्न सकेका छैनौं । सम्भावना चिन्न नसकेर मात्र हामी पछि परेका हौं । आफूलाई खान होइन, अरुलाई मनग्य बेच्न सक्ने गरी उत्पादन गर्न सक्छौं, हामी । तर, सरकार र यसका निकायहरूको ध्यान कहिल्यै कृषिमा परेन । कारण, अथाह सम्भावना भएर पनि कृषि उपेक्षित भएको छ ।
० हाम्रो देश नेपालमा बढी सम्भावना भएका कृषिबालीहरू के के हुन्, त्यो सम्भावनालाई चिन्ने क्षमता हामीमा कत्तिको छ ? बताइदिनुहोस् न !
–अब बर्खा लाग्दैछ । बर्खा लागेपछि छिमेकी देश भारतलगायतमा गोलभेँडा हुँदैन । तर, हाम्रोमा बर्खामा पनि टन्न गोलभेँडा फलाउन सकिने प्रशस्न जग्गा जमिनहरू छन् । रायोको सागको माग भारतसम्म छ, यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्छौं । भूगोल र हावापानीको विविधताले गर्दा हाम्रो देशमा विश्वमा हुने अधिकांश चिजबिजहरू उत्पादन हुन्छ । कफी, चियादेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ । तर सम्भावना केबल सम्भावनामै सीमित छ ।
० अलि बढी सम्भावना भएको चाहिँ के छ नेपालमा ?
–पहिलो कुरा त आफू बाँच्नु प¥यो । बिक्री गर्ने भनेको आफूलाई पुगेपछि हो । नेपालका तरकारीहरूको माग भारत, बंगलादेशलगायत देशसम्मै भएकाले तरकारी बालीहरूमा राम्रो सम्भावना छ । नेपालमा विश्वमै नपाइने जडिबुटीहरू हुन्छन्, जुन उत्तिकै बहुमूल्य पनि छन् । त्यसबाट मनग्ये आम्दानी हामी गर्नसक्छौं । तर, हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । यी सबै सम्भावनालाई हामीले क्याच गर्ने हो भने हाम्रो देश यही कृषि पेशाबाट नै सम्पन्न हुन्छ । हामीले अरु काम गर्नु नै पर्दैन ।
० कृषिमा नेपालको जुन सम्भावना छ, त्यसको कति प्रतिशत हामीले उपयोग गरेका छौं त ?
–मानिलिनुस् कृषिमा सात वटा खुड्किला छन् । ती सात खुड्किला मध्ये पहिलो खुड्किलो पनि हामीले पार गर्न सकेका छैनौं । हामीले सातवटै खुड्किला पार गर्ने हो भने विश्वमै अब्बल नेपाल हुनेछ ।
० नीतिगत, योजनामा कमजोरी छ । माथिल्लो निकायमा हुनेले स्वार्थ मात्र हेरे भन्ने सुनिन्छ । ढंग नपुगेको चाहिँ कहाँनिर हो ?
–पहिलो त हामी योजना बनाउँदा नै चुकेका छौं । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने कृषि वैज्ञानिक र विशेषज्ञ हाम्रो देशमा मनग्ये छन् । तर, वैज्ञानिक र विज्ञले होइन, आइएड, बिएड गरेकाले यहाँ कृषिको योजना बनाउँछन् । अब तपाईं नै भन्नुस्, क्रिकेटको खेलाडीलाई फुटबल खेलमा उतारेर उसले कस्तो परिणाम निकाल्ला ? अहिले भएको नै यही हो । यही हचुवापनका कारण गोलभेंडा फल्ने जमिनमा मकै खेती, मकै फल्ने जमिनमा गोलभेंडा खेती भइरहछ । खेती गर्दा उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्नेदेखि बजारमा निर्यात गर्नेसम्मको योजना बनाउनु पर्छ । तर, हाम्रोमा यस्ता योजनाहरू कुन चरीको नाम हो कसैलाई थाहा छैन । कारण, हामीले गरेका उत्पादनहरूले अनेक समस्यामा फस्छन् ।
० राम्रा योजनाहरू चाहिँ बनेकै छैनन् त ?
–राम्रा योजनाहरू पनि बन्छन्, बन्दै नबन्ने त होइन । केही योजनाहरू बनेका हुन्छन् । तर हाम्रा कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय अप्रभावकारी हुँदा बनेका राम्रा योजनाहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैन । केही प्रतिशत कार्यान्वयन भए पनि त्यसको फाइदा लक्षित वर्गले लिन सकेका हुँदैनन् ।
० यतिधेरै सम्भावना भएर पनि कृषिमा आकर्षण चाहिँ किन छैन ?
–हेर्नुस्, कृषिमा सम्भावना भए पनि पाइला पाइलामा समस्यासँग जुध्नुपर्छ । अहिलेकै सन्दर्भमा कुरा गरौं, किसानलाई यतिबेला मलको जरुरत छ । तर, पुस–माघमा व्यवस्थापन गरेर दिन सकिने मल कृषकले पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि यतिबेला पाउन सकिरहेका छैनन् । मल किन्न गएका कृषकसँग राज्य लाइसेन्स मागिरहेको छ । रक्सी किन्न, चुरोट किन्न लाइसेन्स नचाहिने, कृषि गर्छु भनेर कृषक मल किन्न जाँदा लाइसेन्स चाहिने ? यस्ता अनेक अप्ठ्यारा कृषिमा छन् । अब मल नै नभएपछि कृषकले कसरी धान रोप्न सक्छन् ? यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यस्ता कैयन समस्यासँग नेपाली किसानले जुध्नु परिरहेको छ ।
० यसले साँचो अर्थमा कृषि राज्यको प्राथमिकतामा छैन, उपेक्षित छ भन्ने देखाउँछ । सत्य यस्तै हो ?
–मैले थाहा पाएदेखि नै राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि छ । रातो किताबभित्र कृषि प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने कृषि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । अर्को कुरा राज्यले नै कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन सकेको छैन । कृषिलाई राज्यले नै गरिब, दुःखी, विपन्नले गर्ने पेशा भनेजस्तो गरी हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । कारण, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै तह तप्काको पेटको सुरक्षा गर्दै आएको कृषिको विकास अपेक्षाकृत हुनबाट चुकेको छ ।
० कृषिका मूलभूत समस्याहरू के के हुन् ?
–पहिलो त हाम्रोमा सिँचाइको समस्या छ । सिंचाइ नहुँदा हाम्रा जमिनहरू बाँझै छन् । सिँचाइका लागि योजनाहरू पनि बन्छन्, बजेट छुट्ट्याइन्छ । तर, योजना अनुसारको काम हुँदैन, मिलिजुली बजेटलाई पकेटमा राखिन्छ । राज्यले बजेट छुट्याउँदा छुट्याउँदै पनि सिँचाइको समस्या ज्यूँकात्यूँ नै छ । अरु योजनाहरू पनि यसैगरी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएका छन् ।
टाउको दुखाइको अर्को पक्ष बजार हो । बजार नहुँदा उत्पादन गरेका उपज सस्तोमा बिक्री गर्नु परिरहेको छ । यातायात असुविधा पनि उत्तिकै छ । बिजुली कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन । यातायात असुविधा हुँदा उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म ल्याउनै समस्या छ ।
० कृषि उत्पादनहरूले बजार नपाएको गुनासोहरू सुनिन्छ । खासमा बजारको समस्या किन भइरहेको छ ?
–बजारको सन्दर्भमा कृषकको पनि कमजोरी छ । कृषकहरू कुन बेला के उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छुट्याउन जान्दैनन् । राज्य तालिम र आवश्यक परामर्श दिन आवश्यक ठान्दैन । अरुको देखासिकीमा खेती गर्ने चलन हाम्रोमा छ । बजार समस्यामा सरकारको पनि कमजोरी छ । कृषकले रगत पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजको फाइदा बिचौलियाले बसीबसी त्योभन्दा बढी लिइरहेका छन् ।
कृषक धनी हुनुपर्नेमा बिचौलिया रातारात मालिक बनिरहेका छन् । दुःखको कुरा सरकार यी सबै बेथिती हेरेर बसिरहेको छ । सरकारले यस्ता बेथितीहरू हल गरेर बजार व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । अन्यथा भारतीय बजारले कृषिमा सम्भावना खोजेर आइरहेकाहरूलाई पनि विस्थापित गरिदिनेछ । आउँदा दिनमा नेपालमा हाम्रो उत्पादन शून्य र भारतको यततत्र हुनबाट कसैले रोक्न सक्नेछैन ।
० कृषकलाई अनुदान पनि सरकारले उत्तिकै दिइरहेको हुन्छ । सरकारी अनुदान कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी छ नि ?
–पहिलो त यो कृषि अनुदान वितरण प्रणालीमै खोट छ । सयौं कृषकमा एक दुई जनालाई अनुदान दिएर केही हुनेवाला छैन । अर्को कुरा यसमै पनि धेरै लटरपटर भइरहेको छ । यसबाट वास्तविक किसानभन्दा पनि अरुले लाभ लिइरहेका छन् ।
सरकारले अनुदान कनिका छरेजस्तो गरी छर्नुभन्दा पनि बहुसंख्यक कृषकलाई फाइदा हुने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । जस्तै, पानी नभएको ठाउँमा पानी लगिदिने, सडक नभएको ठाउँमा सडक बनाइदिने, उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान गाडी उपलब्ध गराउने खालको योजना सरकारले ल्याउनुपथ्र्यो । तर, यहाँ त धनीलाई थप धनी बनाउने अनुदानको पो बोलवाला छ त ! अर्बौं डलर भ्रष्टाचारमा हुँदा चुप लागेर बस्ने सरकारले अब कृषिमा मन फुकाएर बजेट छुट्ट्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
० लाखौं युवाहरू विदेशिएका छन् । यिनलाई रोक्न सामथ्र्य नेपालको कृषिले कहिले बनाउँला ?
–हामीसँग सुन फल्ने जमिन छन् । तर, ती जमिन बाँझो राखेर नेपाली युवाहरू खाडीको तातो तावामा श्रम बेच्न बाध्य छन् । व्यवस्थित गर्ने हो भने खाडीमा भन्दा कैयौं गुणा बढी आम्दानी यही गर्न सकिन्छ । तर, वर्षौंदेखि सत्ता र कर्मचारी प्रशासनमा बसेर आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेकाहरू यसमा बाधक बनिरहेका छन् । सबैभन्दा पहिले टेस्टेड दलका नेता र कर्मचारी हटाउनु पर्छ अनिमात्र लाखौं युवाहरू देशमै केहीगर्न सक्ने हुन्छन् । अन्यथा नेपालको कृषिमा योभन्दा पनि भयाबह अवस्था आउनेछ । मैले देखेको त अब नेपाली बजारलाई भारतलगायतका उत्पादनले खर्लप्पै खाइदिने छ ।
० विषादी प्रयोगबारे कुरा गरौं । खासमा विषादीको प्रयोगमा अलि बढी मनपरी भएको हो ?
–विषादी नराख भनेर सबै भन्छन् । तर, विषादीको विकल्प दिन कोही सक्दैनन् । विषादी नराख भन्नेले पहिले विकल्प दिन सक्नु प¥यो नि ? विषादीको विकल्प दिन नसक्ने अनि नराख पनि भन्ने ? यो त भएन नि ।
एनजीओ आइएनजीओहरूले डलर पचाउन हल्लीखल्ली गरिरहेका छन् कि नेपालमा विषादीको प्रयोग अत्यधिक भयो । वास्तवमा विषादीबारेको यो हल्ला गलत हो । संसारमा सबैभन्दा कम विषादी प्रयोग गर्ने देश नेपाल हो । छिमेकी भारतकै कुरा गरौं, त्यहाँ नेपालभन्दा कैयौं गुणा बढी विषादी प्रयोग भइरहेको छ ।
० आग्र्यानिक खेती गर्न पनि त सकिन्छ नि होइन ?
–सकिन्छ, नसकिने होइन । तर, आग्र्यानिक खेतीबाट उत्पादन निकै कम हुन्छ । आग्र्यानिक खेती सबै हिसाबले ठीक भए पनि यसको महत्त्व कसैले बुझेका छैनन् । आग्र्यानिक तरकारी किन्ने हाम्रो चलन नै छैन । आग्र्यानिक तरकारी कोही नकिन्ने, अनि तरकारीमा विषादी राखियो भनेर हुन्छ ? विषादीको चिन्ता हुनेले आग्र्यानिक उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नु प¥यो नि त ? मैले अग्र्यानिक खेती गरेँ तर बिक्दै बिकेन । अहिले छाडिदिएँ । खाने मान्छे नै यहाँ त्यस्तै छन् । भत्केको देशको बिग्रको चाला भनेजस्तो पो छ, कसलाई के भन्ने ?